Usoro Ntuziaka Site na Ihe Ndị Na-eme Ọkụ & Ihe Ntanye; Olee otú iji kwado weebụsaịtị gị site na mwakpo mbanye anataghị ikike
E nwere ọtụtụ cybercrime na-aga n'ihu weebụ. N'ihi ya, ndị mmadụ kwesịrị ịnọmaara ndị a. Maka onye nwere mkpokọta weebụ, nchebe nke achụmnta ego e-commerce tinyere nke ndị ahịa gị dị na gịaka. Ndị na-eme egwuregwu na-etolite ndabere nke mgbochi ojoro, peeji nke phishing yana dị iche iche malware hacks dịka iji Trojans nọ na emailMgbakwụnye.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme nnyocha na-eleba weebụsaịtị maka ọtụtụ ihe - wiki bf goodrich. Ha nwere ike si na onye asọmpin'akụkụ, na-achọ ibute saịtị gị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị na-agba ọsọ nwere ike ịbụ ndị na-achọ ozi nkeonwe dị ka ozi paswọọdụma ọ bụ ọbụna ozi kaadị akwụmụgwọ. E nwere ọtụtụ ụdị hacks, ọtụtụ n'ime ha na-agagharị na-eme ka onye ahụ tara ahụhụ.
Jack Miller, ọkachamara na-ahụ maka Ọcha ,ekwu banyere ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị nwere ike ịhapụ gị ndị omempụ a:
1. Jiri okwuntughe echedoro.
Dị ka nchịkwa nke ebe nrụọrụ weebụ, paswọọdụ gị nwere oke ọrụ nchịkwa n'ime imejide n'aka na saịtị ahụ dum dị nchebe. Okwuntughe dị mfe dị ka 12345 adịghị enwe nchebe ma nwee ike ịdaba ọnwụnwa ikpe na mberede mbanye anataghị ikike. Na ndị ọzọmgbe ufodu, ekwesighi iji okwuntughe nke doro anya. Okwuntughe dị ka ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ aha nwa ewu adịghị ezu. O kwesiriusoro mgbagwoju anya, ichikota ihe odide di iche iche di iche iche..I kwesịkwara ijide n'aka na ihe ọ bụla ọzọ na-ejiebe nrụọrụ weebụ nwere ikikere okwuntughe.
2. Jiri HTTPS.
Iji nchekwa nchedo nchedo nwere ike ịpụta ihe kacha mma maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Dị ka ọmụmaatụ,ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ntinye ntinye HTTPS na-enweta uru karịa ndị na-adịghị. N'ihi ya, nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị yananke ndị ahịa gị na-adabere na atụmatụ gị. Ọzọkwa, ndị mmadụ na-erite uru site n'iji echiche ndị a eme ihe na-emezigharịweebụsaịtị nke ọtụtụ ndị omere ụgbọala apụghị ịbanye.
3. Mara ihe ederede.
Hacking na-aghọ akụkụ nke ụbọchị anyị ụbọchị. Ọtụtụ ndị na-eji ụfọdụoge dị mkpa na ntanetị na-eche ọtụtụ mgbalị mbanye anataghị ikike. Ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ maka ndị ahụ na-agba ọsọ n'ịntanetịusoro dịka admins na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa. Hackers nwere ike mbanye anataghị ikike a na ebe nrụọrụ weebụ ma mee ka ala ụfọdụ nke ya dị oké mkpa akụkụ dị ka arụmọrụ.Nchọpụta Nchọpụta Search gị (SEO) mgbalị nwere ike ngwa ngwa ghọọ ihe ọ bụla n'ihi na mfe, ihe ịga nke ọma hacks. N'ihi ya, nchekwa gịweebụsaịtị yana nke nchekwa nke onye ahịa gị dị n'aka gị dịka onye na-elekọta saịtị ahụ. Ị nwere ike iji ndụmọdụ dị na ntụziaka ndị a imegị na ebe nrụọrụ weebụ dị nchebe, mgbochi àmà megide hackers.